Jumlad Sare oo hufan oo tayo sare leh HTV silikoon ah alaab ceeriin ah oo loogu talagalay Soo -saaraha iyo Bixiyaha dawooyinka | Fuhsite
FUSHITE silicone caag waa nooc ka mid ah caag silikoon ah HTV darajo. Waxay asal ahaan ka kooban tahay polymers silicone iyo fillers. Waxaa lagu daaweeyaa heerkul sare.
Maxaad u doorataa caagaga silikoon ee qiiqa leh
Waxaan u isticmaalnay silica qaaliga ah ee FST-430 sidii buuxiyaha caag silikoon ah.
Sida laga yaabo inaad ogaato silicayada la qiijiyay ayaa ah faa'iidadeena weyn, taas oo beddeli karta Aerosil. Our FST-430 ma aha oo kaliya muujinta daahfurnaanta aad u fiican, laakiin sidoo kale waxay muujin kartaa sifooyin farsamo oo aad u fiican.
Waxaa lagu daaweyn karaa peroxide ama platinum.
Waxyaabaha isku daraya faa'iidooyinka caag silikoon ah oo ujeeddo guud leh kuwa lagu daray-daaweynaya caag silikoon dareere ah, oo ah guryaha farsamo ee aadka u wanaagsan oo leh soo-saar sare.
A: Adeegsiga silica qaxwaha leh oo tayo sare leh oo buuxisa, ma laha ur gaar ah, heer sare oo hufnaan ah, sifooyin jidheed oo aad u fiican & iska caabin huruud ah iyo habsocod wanaagsan. Waxay ku habboon yihiin alaabada la sameeyay oo waxaa loo adeegsan karaa alaabada fasalka xiriirinta cuntada oo aad looga baahan yahay hufnaan sare, sida: ibta naaska, usha qaniinyada, iwm.
Hore: HTV Hufan oo Silicon ah oo Hufan
Xiga: Silrogen Pyrogenic Silica Fumed
Taxanaha FST Fumed adag Silicone Rubber Raw Mate ...
Caag silikoon ah oo hufan oo silikoon ah oo macmal ah ...